ရိုမေးနီးယား vs မွန်တီနီဂရိုး - ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ | ဘောလုံးခန့်မှန်း
+7/ 9584-983-763iဎfအဆိုပါ@socက ceRBet ကိုshoot.cအဆိုပါm
ပွဲစဉ်ရက်စွဲ:4စက်တင်ဘာ 2017 | Posted:4စက်တင်ဘာ 02:02 2017 GMT +2| သိမှတ်ဖွယ်ကြည့်ရှုအားပေး 594 ကြိမ်.
ရိုမေးနီးယား vs မွန်တီနီဂရိုး – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ
ရိုမေးနီးယား vs မွန်တီနီဂရိုး – ကမ္ဘာ့ဖလားအရည်အချင်းများ, မွန်တီနီဂရိုးနှင့်အတူအုပ်စု E ကိုအတွက် 2nd များမှာ 13 မှတ်. သူတို့ကဒိန်းမတ်အဖြစ်မှတ်၏တူညီသောငွေပမာဏရှိပေမယ့်သုံးမှတ်အားဖြင့်ပိုလန်နောက်ကွယ်မှကပ်တွယ်မှုကိုနေကြတယ်. သုံးရက်အကြာကာဇက်စတန်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချအောင်ပွဲမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်, သူတို့ကဒီဂိမ်းသို့ကွှလာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပါလိမ့်မည်. ဒုတိယအစက်အပြောက်ရောက်ရှိဖို့သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အလွန်အသကျရှငျဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေအလွန်ပင်အုပ်စုတစ်စုသည်အဘယ်အရာအတွက်ယခုအချိန်တွင်မှာတော်တော်လေးကောင်းသောအနေအထား၌ရှိကြ၏. They`ve အိမ်မှာဒီသံသရာတော်တော်လေးအစိုင်အခဲဖြစ်, အနိုင်ယူပြီးလက်ကျန်ကာဇက်စတန်နှင့်အာမေးနီးယား, သာပိုလန်မှရမှတ်ဆုံးရှုံးနေချိန်မှာ. ဒီဂိမ်း for Tumbakovic စွန့်ပစ်ခြင်းမှာမိမိအပြည့်အဝအသင်းရပါလိမ့်မယ်.
ရိုမေးနီးယားနှင့်အတူ 4th များမှာ9မှတ်, နှစ်ဦးစလုံးအာမေးနီးယားဆန့်ကျင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူနှစ်ခုသာအနိုင်ပေးမှတျတမျးတငျထားပွီးလြှငျ. နောက်ဆုံးတဦးတည်း, သုံးရက်အကြာလာသော, တော်တော် unconvincing တစျခုဖွစျသညျ, သူတို့သာအခနျးကွီး 91 မိနစ်အတွက်အာမေးနီးကိုချိုးဖျက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲကတည်းက. သူတို့က 55 မိနစ်များတွင်ပင်နယ်တီလွဲချော်ခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ဆန္ဒရှိစွမ်းဆောင်မှုနှင့်တစ်ဦးအဆုံးမှလေးဂိမ်း winless ပြေးရောက်စေဖို့ဆင်းရဲသားလမ်းအနီးဘယ်နေရာမှာပဲ. သူတို့ကဖယ်ကနေသူတို့ရဲ့ဂိမ်းအားလုံးအတွက် unconvincing ကြည့်ရှု 5:0 အာမေးနီးယား၏အနိုင်ယူပြီးလက်ကျန်များနှင့်သူတို့ကလုံးဝနီးပါးဒုတိယနေရာသို့ရောက်ရှိ၏စစ်မှန်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုမပါဘဲများမှာ. မွန်တီနီဂရိုးလိုပဲ, ရိုမေးနီးယားလည်းဤနေရာတွင်အပြည့်အဝအသင်းနှင့်အတူဖြစ်သင့်.
မွန်တီနီဂရိုးကဤ Qualifiers စဉ်အတွင်းတော်တော်လေးကောင်းသောဖျော်ဖြေပွဲပြသ, အာမေးနီးယားဆန့်ကျင်မှသာရှုံးနိမ့်အနုတ်လက္ခဏာဥပမာအဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်အတူ. အခြားတစ်ဖက်တွင်ရိုမေးနီးယား, သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူ dissapointed ကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်. မွန်တီနီဂရိုးအုပ်စုဒုတိယနေရာကိုလုံခြုံရေးများ၏လက်တွေ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိ, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတှေ့ဆုံမှာသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးနောက်အောက်တိုဘာလအတွက်ဒိန်းမတ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် သိ.. ထိုကွောငျ့, သူတို့ကဒီမှာသုံးမှတ်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မည်, သူတို့ကာဇက်စတန်၌ကောင်းသောပြပွဲပြီးနောက်သူတို့ကိုရနိုင်ယုံကွလိမျ့မညျ. မွန်တီနီဂရိုးစဉ်းစားအိမ်မှာကစားနေကြသည်, နှင့်၎င်းတို့၏ခြုံငုံပိုကောင်းစှဲ, သူတို့ကိုငါကဒီမှာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်စဉ်းစားပါ. နှင့်ရိုမေးနီးယားတစ်ဦးအကျပ်အတည်းထွက်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နိုင်စဉ်, သူတို့ကိုငါအားလုံးသုံးမှတ်ယူပြီးကြည့်ရှု can`t. ထိုကွောငျ့, နှင့်အတူကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရန်ကူး0အာရှဟန်းဒီးကပ်သွားကြဖို့တစ်နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့တူပုံရသည်.